Caawinad quseyso adiga ku sugan nolol xoogs­he­e­gasho iyo hanjabad - Migrationsverket
Haddii aad adigu u baahan tahay inaad si degdeg ah uga baxdo bogga - taabo badhanka/batoonka ku jira sanduuqa guduudan/cas ee uu ku qoran yahay qoraalka ah Ka bax bogga hadda! Waxaad ku sugan tahay bog Google oo maran. Waxa kale oo suurtogal ah in la tirtiro raadadka aad kaga tagtay kumbuyuutarka si aad u qariso boggaga aad booqatay.
Waxaad halkan ka akhrisan kartaa sida loo qariyo meelaha aad booqatay (luqadda iswiidhishka).
Waa kuwee dadka la kulmo xoogs­he­e­gashada?
Waayo bey muhiim u tahay inaa anaga na ogey­si­isid haddii aad ku sugan­tahay xaalad xoogs­he­e­gasho/​jir dilid?
Haddii qofka kula nool/aad isqabtaan uu dhibaato kuu geystay
Haddii sharciga deggenaanshaha lagugu siiyey xubin qoyskaaga ka mid ah, waxaad xaaladaha qaarkood heli kartaa in sharciga deggenaanshaha laguu dheereeyo haddii qofkii aad isqabteen xiriirkii aad lahaydeen uu dhammaaday iyada oo ay sabab u tahay inuu adiga ama ilmahaaga dhibtaato u geystay lammaanahaagii. Warbixin dheeraad ah oo taa ku saabsan waxaad ka akhrisan kartaa bogga Sharciga deggenaanshaha dadka isla noolaa ee xiriirkoodii dhammaaday (oo af ingiriis).
Ilaalinta xogta shak­hsiga
Macluumaadka ku saabsan qofka u baahan inuu codsado ilaalinta xogta shakhsiga (luqadda ingiriiska). External link, opens in new window.
of Xafiisyada iyo goobaha dowlada
Ka bax bogga hadda!
Suubi sidan marka aad qarineysid boggan